URamaphosa ugqugquzele i-ANC eDambuza ukuthi izilungiselele inkomfa yenqubomgomo yeqembu | News24
URamaphosa ugqugquzele i-ANC eDambuza ukuthi izilungiselele inkomfa yenqubomgomo yeqembu
Iphini likaMongameli wezwe, uCyril Ramaphosa evakashele umndeni kaNgqongqoshe wezeMfundo yamabanga aPhakeme uBlade Nzimande ngeledlule ukuzodlulisa amazwi enduduzo ngokudlula emhlabeni kuka Mama uNzimande, unina kangqongqoshe.Isithombe: MAKHOSANDILE ZULU
IPHINI likaMongameli wezwe, uCyril Ramapahosa, ophinde abe ngusekela mongameli weqembu likaKhongolose, uvakashele umndeni kaNgqongqoshe wezeMfundo yamabanga aPhakeme uDkt Blade Nzimande ngoLwesine oledlule ukuzodlulisa amazwi enduduzo ngokudlula emhlabeni kuka nina kaNzimande uNozipho Nzimande.
Umama Nzimande udlule emhlabeni ngeSonto ngomhlaka 11 kuJuni kanti ubekwe endaweni yakhe yokugcina ngempelasonto.
Efika kwaNzimande eDambuza, Edendale, uRamaphosa wamukelwe yisixuku sabalandeli beqembu le-ANC abanye abekade begqoke amakepisi nezikibha ezinombhalo ophakamisa ukweseka umkhankaso wakhe wokuba ngumongameli weqembu njengoba kubhekwe engqungqutheleni yokukhetha ubuholi bukazwelonke ezoba ngoDisemba.
Ekhuluma nabalandeni beqembu emagcekeni aKwaNzimande, uRamaphosa uthe: “Kuyangijabulisa ukubona ukuthi i-ANC iyaweseka umndeni wakwaNzimande, ngiyazi ukuthi i-Dambuza ikhaya le-ANC. Nani abanye senginibona nifake amanye amakepisi anemibhalo ethi #CR17, angazi ukuthi niwathola kuphi, ngifuna ukuthi ningikhombise lesisitolo la eniwathola khona,” kusho yena.
Uthe kumele amalungu e-ANC aqikelele ukuthi amagatsha eqembu aqinile futhi ami ngomumo njengoba kuza inkomfa yenqubomgomo kuyona le nyanga kaJuni.
“Uma sesikwinkomfa yenqubomgomo sifuna ukuzwa igatsha laseDambuza libeka iziphakamiso ezizoletha inguquko, sifuna ukuthi izithunywa zenu uma zikhuluma lapha sizizwe zikhuluma into ehlakaniphile. Emva kwalokho siya engqungqutheleni yokukhetha ubuholi bukazwelonke ngoDisemba,” kusho uRamaphosa.
Uthe ungqongqoshe umxoxele ngomlando we-ANC endaweni yaseDambuza nokuthi iningi labantu abasungula leliqembu baqhamuka khona.
“Ukufika kwami la, u-comrade Blade ubesengitshela ngomlando walendawo ukuthi kahle kahle abantu abaqamba i-ANC ngo-1912 abaningi babo baphuma khona la. Kusho ke ukuthi lendawo iyona ikhaya le-ANC, i-ANC ihlala la, izalwa la, iphila la, ihamba la,” kusho uRamaphosa.
Usekela mongameli we-ANC uthe wafonelwa watshelwa nguyena ungqongqoshe uNzimande ngokudlula emhlabeni kukanina.
“Ngathuka ngathi engabe ufuna ukungitshelani u-comrade Blade, mhlawumpe ufuna ukungitshela ukuthi ukhushulelwe esikhundleni esiphezulu kodwa ngazi ubuza ukuthi ngesiphi esinye isikhundla angakhushulelwa kusona njengoba esenguNgqongqoshe wezeMfundo yamabanga aPhakeme vele.
Ngathuka futhi ngazitshela ukuthi mhlawumpe bayamkhipha, ngathi mhlampe sekwenziwe olunye ushintsho kwiKhabinethi kodwa wayefuna ukungitshela ngendaba ebuhlungu kakhulu ukuthi umama usishiyile,” kusho yena.
Uqhube wathi ukuzwa ngokudlula emhlabeni kuka Mama uNzimande kumshiye nenhliziyo ebuhlungu ngoba ngesikhathi kugujwa usuku lokuzalwa lwakhe unina kaNzimande akaphumelelanga emcimbini.
“Ngangifisa ukufika la eDambuza ukuze ngizombona lomama, lomama owasizalela inkokheli u-comrade Blade, inkokheli ekhuluma kakhulu, ngangifisa ukubona ugogo ukuze ngizombuza ukuthi wayemncelisa luphi ubisi u-Blade kodwa ngeshwa angilitholanga ithuba lokuthi ngize kwimigubho yosuku lokuzalwa kwakhe,” kusho uRamaphosa encokola.
Uqhube wathi ungqongqoshe umtshele ukuthi uMama Nzimande ubeyilungu eliqavile le-ANC endaweni yaseDambuza.
“Ngithe ngikhuluma nomndeni ngabatshela ukuthi ngilethe namazwi enduduzo aqhamuka kwi-ANC, ukuthi kwi-ANC izinhliziyo zethu zibuhlungu kodwa futhi siyabungaza, sibungaza impilo kamama ukuthi ubeyiqhawe ngempela, eyilungu le-ANC ngokuphelele yingakho sithi ifulegi le-ANC belihlezi lisenhlizweni yakhe futhi uzoncwatshwa nalo, iyona into esijabulisa kakhulu,” kusho uRamaphosa.